Indlela yokuvala iAkhawunti yam yeTwitter Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayivala njani iakhawunti yam ye-twitter
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 282
I-Twitter zombini liqonga lonxibelelwano elihambahambayo kunye newebhu. Iphuhlisiwe phantsi kwe-nanoblogging scheme, esekwe kugqithiso lolwazi kweyona ndlela ikhonkrithi nefanelekileyo. Oku kwenza ukuba umyalezo ufike kwifom encinci, kodwa ngokukhawuleza.
Abasebenzisi be-Twitter banethuba lokuba phantsi kwale ndlela yemiyalezo emincinci, iindaba, iminyhadala kunye nezinye izihloko zomdla ekwabelwana ngazo kwelona xesha lifutshane kwaye, kwelona nani likhulu labantu, ene "retweet" elula.
Enkosi ngendlela esebenza ngayo i-Twitter, izinzile njengenye yeenethiwekhi ezisasaza iindaba kakhulu. Isetyenziswe ngabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-390 emhlabeni jikelele. Ingakumbi amanani oluntu avela kwezopolitiko kunye nosaziwayo.
Ayizizo zonke izinto ezimnandi
Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwale nethiwekhi kuthobele ezinye izinto ezinganyanisekanga, eziye zasebenzisa ithuba lokudlulisa imiyalezo enentiyo ngeendlela zayo ezahlukeneyo.
Umzekelo oqhelekileyo woku ziindaba ezingezizo. Apho, ngenxa yesakhono se-twitter sokusasaza iindaba ngamaxabiso amangalisayo, iindaba ezingeyonyani malunga nezinye izehlo okanye abantu zisasazwa.
Kwelinye icala, ikwasebenza njengesixhobo sokusebenzisa abasebenzisi ngokungapheliyo Ukuqhushumba kweendaba, ikakhulu ezingathandekiyo, ezichaphazela ukuzinza kwengqondo kunye noluntu kwabanye abantu.
Kufuneka wenze ntoni xa uziva uxinekile yimidiya yoluntu?
Amaninzi amaninzi kumanethiwekhi athatha isigqibo sokuthatha ixesha, okanye abhalise ngokusisigxina kwiintanethi zentlalo. Esi sisixhobo esisebenza kakuhle kakhulu ukuzahlula kwaye uzikhuphe kwisingqi esikhawulezayo sale nethiwekhi.
Ukuba uthatha isigqibo sokushiya i-twitter, inkqubo ilula kakhulu kwaye iyakhawuleza. Ngokulandela ezi zinto zilandelayo unokuziphumeza:
Xa uqhagamshela kwi-app
1.- Kwimeko yokuqala kufuneka ungene kwiakhawunti yakho nangayiphi na indlela, nokuba yeyiphi iwebhu okanye iselfowuni.
2.- Skrola ujongano lwe-twitter de ufike kwiprofayile yakhol, ethi, xa icinezelwe, kuboniswe imenyu enoluhlu lwamacandelo.
3.- Yiya kuseto nakwicandelo labucala. Emva kwecandelo eligama lingu "akhawunti yakho".
4.- Okulandelayo, kweli candelo, kanye ekupheleni kwemenyuUya kufumana icandelo lokucinywa kweakhawunti.
Nje ukuba ungene apho, ujongano lokuvala luya kuvela. Kweli candelo, i-twitter ikuvumela ukuba wazi ukuba kwenzeka ntoni xa ungasebenzi iakhawunti yakho; phulukana negama lakho lomsebenzisi kunye neprofayile yoluntu ikakhulu.
Kwelinye icala, ikunika iingcebiso; Unokuvula iakhawunti yakho kangangeentsuku ezingama-30 zilandelelana emva kokuyicima. Ngokunjalo, ezinye iinkcukacha ezivela kwiprofayile yakho zinokufumaneka kukhangelo lwewebhu.
Ungatshintsha neakhawunti, ukuba unqwenela, okanye ukhuphele idatha yakho yeprofayili kwifayile ye.zip, ukuze ukwazi ukuzigcina.
Okokugqibela, ulibethe igama elithi deactivate, ebekwe ezantsi kwimenyu ukwenza ukwenziwa kweakhawunti kungasebenzi.
Xa uqhagamshela kwiwebhu:
Ukuba ufaka i-twitter ngesikhangeli sewebhu, inkqubo iyafana kakhulu nohlobo lokusebenza. Awuzukufikelela kwimenyu ye-twitter kwifoto yakho yeprofayile, kuba eli candelo liya kubonakala kwikholamu yasekhohlo yomda weqonga.
Nje ukuba icandelo elihambelanayo likho, inkqubo iyafana.
1 Ayizizo zonke izinto ezimnandi
2 Kufuneka wenze ntoni xa uziva uxinekile yimidiya yoluntu?
3 Xa uqhagamshela kwi-app
4 Xa uqhagamshela kwiwebhu:
Ungazikhuphela njani iividiyo kwi-twitter?